Samurai - iqhawe Japanese Ephakathi.
Samurai ngokungenabugovu sesikhonze inkosi yaso futhi ukulungele ngaphandle kokuthandabuza ukuze anikele ukuphila kwakhe ngenxa ke. Ayehlukile amasu ephumelelayo uthango, ukwethembeka kanye ukungabakhathaleli nhlobo ukwesaba ukufa.
Kwakumelwe ngokugqamile, kodwa ngesikhathi esifanayo, abantu abahlakaniphile nangokulinganisela ababefundisiwe lo mqeqeshi amadala, ukufunda konke ukuhlakanipha isevisi ngesikhathi umdala.
Lapha kwaba le Samurai iqhawe. Udweba kanjani ke, zichaziwe ngezansi.
Ukudweba ndawonye Samurai
Lungiselela ephepheni, ipensela kanye irabha. Manje uzofunda indlela ukudweba izigaba Samurai ipensela.
Yenza indaba emfushane ka a Samurai ngesisekelo izibalo: Okusaqanda - ihloko, umzimba, izingalo nemilenze - nje izingxenye. Ingalo yangakwesobunxele uzimisele endololwaneni. Imilenze ngqo. Lena indlela yekuma static ejwayelekile.
Manje kufanele uqale ukusebenza ngaphandle emzimbeni iqhawe. Dweba entanyeni - iDemo isilinda emahlombe. Nakekela izandla zakho. Hlukanisa ingxenye ngayinye ibe izingxenye ezinhlanu: ilebula ehlombe, indololwane kanye isandla emibuthanweni encane. Emahlombe futhi ingalo elingenhla - amasilinda eside.
Lolonga esifubeni, okumele Taper kancane maqondana ngezansi. Ingxenye engezansi, kunalokho, kufanele wanda kakhulu isizinda. Futhi uphawu onyaweni.
Dweba izici zobuso. Lokhu kungenziwa schematically, ngaphandle kokuya imininingwane, njengoba lokhu akuyona portrait. Ukuze kahle beka amehlo kanye nekhala, nomuntu owaziko bona umthetho eyodwa elula: amashiya kumele kuhambisane ne phezulu ezindlebeni futhi engxenyeni engezansi ekhaleni - zilingana nezinhlobo izindlebe. Izindebe zaso engonxantathu kancane njengoba draw phansi strip. Bheka Samurai - ejulile ezinzima.
Engeza imininingwane ezazigqokwa zonke Samurai. Udweba kanjani isembatho sakhe? Okokuqala - kuba phezulu ivesti Samurai ngokuthi haori, anakho ukuma unxantathu nabokhulumile. Ingxenye engenhla obanzi kakhulu futhi ihlanganisa ngisho emahlombe.
ibhande lakhe inkemba Samurai kufihlwe emgodleni - katana. Ngesandla sobunxele ngokuqinile szhivaetsya inkemba.
Kusukela ngaphansi haori ukudweba okuxekethile, imikhono kancane lwavutha, ungakwazi ukufinyelela kwesakho fan esandleni sakhe sokunene. Sula yonke imigqa asizayo phezu esifubeni engenhla futhi izingalo.
Sekukancane ukuba ugcwalise Samurai. Udweba kanjani engxenyeni engenhla, usuwazi. Washiya ukusebenza ngezinyawo zabo. Impi Japanese babe ibhulukwe Airy ngokuthi hakama. Kuyoba kakhulu lula umsebenzi wakho, njengoba kungekho isidingo ucinga ukuma imilenze futhi abanye kwemisipha. Beka warrior yakho e Samurai izicathulo bendabuko, okusikhumbuza flip flops.
Lapha futhi Samurai ngomumo. Udweba kanjani iqhawe Japanese, manje uyazi. Njengoba ubona, ke ilula.
Uma ufuna - wena angakha isithombe, kodwa in black and white, kubukeka amahle nakakhulu ngokuqinile, okusho umxhwele. Lokhu Samurai drawing isifundo ulula, ukuze ukwazi kalula wenze isithombe sakho.
Izinzuzo Uhlolojikelele umdwebo indlela kungenziwa ngokuthi ukuthi ingxenye enkulu esithombeni kuthatha izingubo, futhi ngokuvamile kuba lula ukukhetha ukuphuma kuka izingxenye zomzimba womuntu.
Uma umphumela umsebenzi unganelisekile okokuqala - ungakhathazeki. Zama futhi, futhi ekugcineni uzokwazi ukudweba lezi zinhlamvu e zibhekise static kalula futhi ngokushesha.
Izinhlobo futhi izinhlobo yobuciko
K. P. Bryullov futhi A. S. Pushkin. Portrait i umbhali akaziwa
Kusiza ngomentshisi - kwembula izimfihlo
Spot Umdwebo Wabasaqalayo amakhosi
Iplanethi Ebomvu Pattaya (ex Tune.) 3 * (Pattaya, Thailand): incazelo ehhotela, izilinganiso
Activator ngoba carp izinhlanzi ngezandla
Inhloko Ucwaningo Wezindaba Russia Anatoly Yakunin: Biography nemisebenzi
Lotus Ezokungcebeleka Ihhotela 3 * (India, South Goa): isikhathi sokuphumula, izivakashi Izibuyekezo
Iziyalezo "Lego" - losizo ukuthola ingane
Original zokupheka kakhulu yenza i
Ibhubesi Owesilisa ... nokuthi-ke
Be Kuhle ngoNkulunkulu